राजशक्तिलाई बाहेक नगर
वास्तवमा भन्नु पर्दा यो शासन व्यवस्था गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता असफल भइसक्यो । जनआन्दोलनबाट परिवर्तन आएको होइन कि विदेशीले इच्छाअनुसार मात्र यो व्यवस्था लादिएको हो भन्ने पनि पुष्टि भइसक्यो । पशुपतिनाथको पुजारी फेरेर नेपालीलाई पुजारी बनाउन नसक्ने, आफ्नै मातहतको कर्मचारी नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिलाई तह (कटवाल प्रकरण) लगाउन नसक्नेले अढाइसय वर्षको इतिहास बोकेको शाहबंशलाई समाप्त पार्‍यौं भनेर तिनका कार्यकर्तालाई भन्ने र तिनैका कार्यकर्ताले मात्र थपडी बजाउने कुरा हुन् । बुझेका नेपालीले यस्ता बकमफुसे कुरा मान्दैनन् ।
जाबो एउटा पुजारी परिवर्तन गर्न खोज्दा नसक्नेले राजतन्त्त फ्याँक्यौंभनेर फूर्ति लगाउने ? नेपालीको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने विदेशीको इसारामा भएको यो परिवर्तन शनै: शनै: पतनतिर उन्मुख छ । तीनतहको निर्वाचन सक्याएर यो व्यवस्था संस्थागत भइसक्यो भन्नेहरु नै कताबाट आयो आयो भन्न थालेका छन् ।
राजसंस्थाको जरा छ, विदेशी षडयन्त्रको करौंतीले रुख ढालिएकोमात्र हो । लादिएको व्यवस्थाको जरा नै छैन, परिणाम चलाउन नसकिने रहेछ । चुनावबाट दुई तिहाई बहुमत प्राप्त नेकपाको जेमन्तले आक्रान्त बनेका जनता र विपक्षी दलहरु बरु पहिलेकै संविधान ठिक भन्न थालेका छन् ।
हो धर्मनिरपेक्षता र राजतन्त्रको कुरा सिधा उठान गर्न नसकेता पनि यही मुद्दामा टेक्न नसक्दा कांग्रेसले चुनाव हारेको अनुभव भइसकेको छ । कम्युनिष्टले जितेर आमनागरिकको जीवनयापन नै जोखिममा पारिदिएको अनुभूत पनि भइसककेो छ । यहीकारण हिन्दुधर्म र संघीयताको खारेजीसहित राजतन्त्रको माँग सुरु भइसकेको छ । यो शासन व्यवस्था सञ्चालन हुनै सकेन, पार्टीका कार्यकर्ता बाहेक कसैले यो संविधान, व्यवस्थालाई अपनत्व स्वीकार नै गरेनन् । राजतन्त्र फालेपछि स्वर्ग प्राप्त हुन्छ भनेर जुन सपना देखाइएको थियो, नागरिक झल्यास्स ब्यूँझिन पुगेका छन् । सबैले थाहा पाए यो त भ्रम पो छरिएको रहेछ ।
अव अरु विकास, समृद्धि, शान्ति, सुशासनका कुरा त असामान्य भइसक्यो, अव त मुलुक नै नरहने हो कि भन्ने खतराको घण्टी पो सुनिन्छ । संघीयताको बखान गर्नेहरुले संघीय सरकार त गठन गरे, केन्द्रको हस्तक्षेप र प्रदेश प्रदेशवीच समेत बैमनुस्यता सुरु भइसकेको छ । हिजो केन्द्रमा भ्रष्टाचार थियो, आज ७ सय ६१ सरकार, सबैतिर भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार व्याप्त छ । न्यायालयको केही भर थियो, अव न्यायालयको निष्पक्षता समेत करीव करीव पार्टीकरण उन्मुख भइसकेको छ । प्रशासन र प्रहरीको हालत बेहाल छ । सबैतिर सेटिङ र अनियमिततामात्र देखिन्छ । अर्थात् हिजो राजतन्त्र हुन्जेल निष्पक्ष र स्वतन्त्त रहेका निकायहरु पार्टीकरण गरेर लोकतन्त्रको गरिमा गिराउने मुलुकलाई अराजक बनाउने काम भइरहेका छन् ।
उता संवैधानिक निकायहरु, राजदूतहरुको त कुरै नउठाउँ, ती सबै कार्यकर्ता निर्माण र भर्तिकेन्द्र बनेका छन् । अनेकतामा एकता थियो, आज धार्मिक, जातीय, भाषिक, लैंगिक, क्षेत्रीय द्वन्द्व बिजारोपण गर्ने कार्य चमतोत्कर्षमा छ । यही सबका लागि जनयुद्ध, जनआन्दोलन भएको थियो । यहाँसम्म कि धर्मनिरपेक्षता र संघीयता घुसाएर राष्ट्रविरोधीहरुलाई चखलेख गर्ने मौका दिने कामासमेत भएको छ । जबसम्म एकताभावका साथ धार्मिक सहिष्णुता र निष्पक्ष न्यायका साथ सवल सुरक्षा निकाय हुन्न, तवसम्म सबै नेपालीले हित भएको अनुभूति गर्न पाउनेछैनन् । अहिले त पार्टीका मान्छेको हालीमुहाली चलेको छ, पार्टी इतरकालाई पाखा लगाउने काम भएको छ ।
यसकारण पनि राजतन्त्र सहितको लोकतन्त्र देशको आवश्यकता बनेको हो । ०६३ सालको परिवर्तनपछि ज्ञानेन्द्र शाह चुपै लागेर नागरिक हैसियतमा बसे । १३ वर्षमा समस्यामात्र थपियो, सुन्दरता कतै केही पनि देख्न पाइएन । सपनामाथि सपना देखाएर देश र नागरिकलाई लुट्ने व्यवस्था पो साबित हुनपुग्यो यो परिवर्तन त ? नेपाली जनताका सामु के कबुल गरेर यो परिवर्तन ल्याइएको थियो ? जनताले त निरंकूशता हटाउनु भनेका थिए, राजतन्त्र र हिन्दुधर्म हटाएर यो गाईजात्रा किन देखाएको हो ? राष्ट्रिय सहमतिका साथ राष्ट्रिय एकताको चिन्ता बाँकी छ र राष्ट्रघातक र पातकको डर छ भने राजनीतिक दलहरुले राजासहितको लोकतन्त्रको सुरुआत गर्दा राष्ट्रको कल्याण होला ।
किनभने जनताले अर्को जनआन्दोलन गरे र फेरि परिवर्तन भयो भने आजका नेताहरु जो कमिशन र भ्रष्टाचारमा डामिएका छन्, राष्ट्रघातको दाग लागेको छ, तिनीहरुमाथि जनताले कस्तोखाले कारवाहीको माँग गर्लान् । अव कसैको आँखामा कुनै पनि प्रकारको भ्रम बाँकी छैन, सबैले नेताहरु सपना बाँड्ने मेसिन हुन् भन्ने बुझिसके । सपना देखाएर जनता मार्ने खेती राजनीति बन्यो, कहिलेसम्म यस्तो भोरजुवा चल्ला र ?
यसैले नेताहरुले नसक्ने र नचल्ने संघीयता, धर्मनिपरपेक्षता र गणतन्त्रलाई सुहाउँदो बनाउनै पर्छ ।